Golaha wakiillada Puntland oo meelmariyay qaabka loo ansixinayo xukuumadda – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland oo meelmariyay qaabka loo ansixinayo xukuumadda
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta meelmariyay qaabka loo ansixinayo golaha wasiirada cusub ee Puntland, kuwaas oo la sugayo in madaxweynuhu magcaabo.
Kooramka waxaa fadhiyay 53 xildhibaan.
Kulan caadi ah oo ay maanta yeesheen baarlamanku ayaa la isku mari waayay habka ansixintu noqon doonto.
Waxaa miiska saarnaa laba qorshe oo kala ah in wasiirada wadar loo ansixiyo iyo in qof qof loo ansixiyo midkood in la qaato. Labada qaab ee ansixinta ayaa laba jeer codad isku mid ah ka helay baarlamanka.
Guddoonka ayaa mar saddexaad ku celiyay in labada qaab midkood la ansixiyo.
Ansixinta oo gacan taag ahayd, 26 mudane ayaa u codeeyay in golaha wasiirada si wadajir ah loo ansixiyo, 24 ayaa u codeeyay in qof qof loo ansixiyo halka saddex mudane ay ka aamuseen.
Golaha wakiiladu waxay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa doorteen 8dii Janaayo, 2019.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulahi Deni ayaan weli soo magcaabin golihiisa xukuumadda, waxayna ku qaadatay mudo ka badan wakhtigii dastuuriga ahaa 21 beri gudahood. Baarlamanka ayaa 22 janaayo 2019, waxay aqbaleen codsi madaxweynaha uga yimi oo ahaa in 14 cisho loogu daro wakhtiga uu golaha ku soo magcaabayo oo ku eg Isniinta beri ah.
Maanta ah ayaa la filayaa in madaxtooyadu ay shaaciso golaha wasiirada cusub.
Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo in Al-Shabaab loo doonto garsoor ku tilmaamay Dambi Qaran